Iindaba-Ingqokelela yemveliso ye-TPU ebunjiweyo
Ingqokelela yemveliso ye-TPU ebolayo
Ungaqaphela ukuba kuyatshisa kwaye kuyatshisa ehlotyeni, kuyabanda kwaye kuyabanda ebusika. Ukukhuselwa kwendalo esiba yimfuneko. Kunye nabantu kwisicelo sokhuselo lokusingqongileyo ngaphezulu nangaphezulu, ngokufanelekileyo, izinto ezinokubakho ezinokuboliswa ziintsholongwane ngumkhwa. Ngaphandle kweziyenkomo eco-friendly, Iindiza zePLA ezinokuboliswa ziintsholongwane, Iphepha lokusela imichiza, iibhokisi zesonka sasemini, i-coaster yeplanga kunye nezitshixoNjl Ukunikela kwimizamo yethu elinganiselweyo kukhuselo lokusingqongileyo, kunye kunye nomhlaba ongcono.
Izinto ze-TPU zizinto ezinobume bendalo ezinokuthotywa. Iyaguquguquka, ihlala ixesha elide kwaye iyanyamezela ukungcola. Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane zinokusetyenziswa kwiimveliso zethu ezahlukeneyo ezinjengeelebhile zokuthunga,iimagnethi zefriji, Iithegi eziphambili, iimeko zeefowuni, i-screen wiper, ikhubalo zefowuni, iithegi zemithwalo, abanini bamakhadi njl njl. Ngaphezu koko, unokuzenzela ilogo yakho. Iimpawu ezahlukeneyo zokuyila zinokwenziwa kwi-TPU, njengokushicilelwa kwesilika, ukuprinta nge-offset, i-lenticular, glittering, glimmering, glitter fluid njalo njalo. Iimveliso zethu ze-Eco-Friendly TPU zigqibelele ukunyusa, intengiso, ukuqokelela, isipho, ukuhambisa izisombululo zokuchonga uphawu njl.
Amandla eTPU: ezinokuboliswa ziintsholongwane, ziguquguquke, zomelele kwaye zinganyangeki kukungcola
Iimpawu zangokwezifiso: Ukubengezela, ukubengezela, ukushicilela kwe-lenticular, ulwelo olubengezelayo, ushicilelo lwe-silkscreen, ushicilelo lwe-offset njl.
MOQ: 500pcs / uyilo
Ngaba unomdla kwaye ufuna ukuvelisa iimveliso ze-TPU kunye nelogo yakho yesiko kwizinto ozenzayo? Nceda ucebise nje into kwivenkile yethu ekwi-intanethi okanye kwikhathalogu ebanzi, sithumele ilogo yakho okanye uyilo kunye nemodeli kunye nesimbo osikhethile. Siza kukuthumelela ulwazi lwamaxabiso kunye nomfanekiso wobungqina osekwe kuyilo lwakho nge-imeyile. Nje ukuba uvume ubungqina kwaye ungenise intlawulo, siya kwenza uyilo lwakho kwaye siyithumele kuwe.